स्तन क्यान्सर कसरी हून्छ ? जानिराख्नुहोस् - Purbeli News
स्तन क्यान्सर कसरी हून्छ ? जानिराख्नुहोस्
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ ०५, २०७६ समय: १६:३८:००
मानव शरीरमा रहेका कोषको वृद्धि र विभाजन शरीरको आवश्यकताअनुसार हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ स्तनमा अनावश्यक रुपमा कोष वृद्धि हुन थाल्छ । यस्तो हुँदा क्यान्सरको जोखिम हुन्छ । कोषमा आउने अनावश्यक परिवर्तनका कारण स्तनमा गिर्खा, गाँठागुठी, घाउ निस्कने हुन्छ । जसलाई स्तन क्यान्सर भनिन्छ । शारीरिक रुपमा कम सक्रिय हुनु, व्यायामसमेत नगर्ने भएका कारण स्तन क्यान्सरका बिरामीको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।